Nnwom 128 AKCB - Mateusza 128 SZ-PL
1Nhyira ne wɔn a wosuro Awurade,
na wɔnantew nʼakwan so.
2Wubedi wʼadwuma so aba;
nhyira ne yiyedi bɛyɛ wo de.
3Wo yere bɛyɛ sɛ bobe a ɛsow aba
wɔ wo fi;
na wo mmabarima ayɛ sɛ ngodua a afifi
atwa wo pon ho ahyia.
4Yiw, sɛɛ ne nea wobehyira
onipa a osuro Awurade no.
5Awurade nhyira wo mfi Sion
na ɔmma wunhu Yerusalem yiyeyɛ;
6Ɔmma wo ntena ase nhu wo mma mma.
AKCB : Nnwom 128